Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Stockholms län / Nynäshamn
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 15 7 2020
Degmada Nynäshamn waa meel eey ku kulmaan bad iyo dhul dabici ah. Halkaan waxaad u dhowdahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha. Halkaan waxaad ku heysataa magaalo yar oo eey yaallaan waxyaabaha magaalooyinka waaweyn yaallo oo dhan.
1,301 kiilomitir oo laba jibaaran
Södertälje 52 kiilomitir
Stockholm 58 kiilomitir
Uppsala 131 kiilomitir
Xaafado badda u dhow iyo meelo aad u qurux badan oo fursad kuu siinaya inaad ku noolaatid meelo hawo macaan dhul dabiici ah ku yaal. waxaan nahay mid ka mid ah gobolllada ugu kobciga og ee Iswiidhan. Isu socod gaadiid oo fiican lehna jid tareen iyo jid weyn oo baabuur oo ku geynaya Stockholm suuqaqeeda waaweyn. Soo booqo oo soo arag Nynäshamn - Goobta eey badda iyo nolosha ku kulmaan.
Degmada Nynäshamn waxaa degan 27 500 oo qofood. Qaar waxeey ag deganyihiin baddan, qaarna baadiyaha, qaarna xaafadaha isku dhow dhow.
Nynäshamn waxaa ku yaal guryo nuucyo kala duwna le Degmada malahan guryaha safka loogu jiro laakin waxaa jira shirkad degmada eey leedahay lana dhaho Nynäshamnsbostäder.
Nynäshamn waxaa ka jira jaaliyado badan o eey dadka waxyaabaha kala duwan xiiseeya ku damaashaadaan, dadka imaadana waxeey leeyihiin da'kasta waxeeyna ku damaashaadaan muusik, farshaxan, xeeywaanno, qaar caafimaadka wax ka barta iyo waxyaabo la halmaala. Diiwaanka jaaliyadaha ee degmada Nynäshamn waxaa ka raadin kartaa jaaliyada aad xiiseyneysid.
Warbixin ku saabsan degmada waxaad ka heleysaa xafiiska degmada. Maktabad waxeey taal Folkets hus iyo iskoollada ku yaal Ösmo iyo Sorunda. Melo badan oo ka mid ah degmada waxaa ku yaal dukaamo, makhaayado, kafateeriyo iyo dukaamo gado laabyo cusub iyo kuwo lasoo isticmaalay, dhar iyo waxyaabaha eey carruurta ku cayaaraan.
Nynäshamn waxaad ka heleysaa farmashiiye, bangiyo, meesha indhaha iyo kuwo kale. Bartamaha Nynäshamn waxeey shirkado iyo dukaaman badan boggagooda internetka ah kusoo bandhigaan waxyaabaha eey sameeyaan.
Dukaamo badan oo kuwa raashinka ah ayaa ku yaal degmada.
Nynäshamn waxaad ka heleysaa dukaamada Coop Nynäshamn, Willys Nynäshamn, Lidl Nynäshamn iyo Maxi ICA Stormarknad Nynäshamn.
Ösmo waxaa ku yaal ICA Supermarket xaafada Sorunda waxaa ku yaal Coop Nära Spångbro.
Degmada waxaa ku yaal dugsiyada xanaanada carruurta iyo guryaha xanaanada carruurta waxaanan loogu tala galay kuwa jira 1-5 sano.
Degmada waxaa ku yaal dugsiyada hoosedhexe waxaanan loogu tala galay illaa ardayda dhigata fasalka 9. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan dugsiyada hoosedhexe ee degmada ka akhriso degmada boggeda internetka.
Degmada waxaa fursad loo helaayaa waxbarasho dugsi sare ah, oo lagu dhigto iskoolka Nynäshamns gymnasium, oo lagu barto barnaamijyada soo socda:
Cilmiga tammarta iyo Korontada
Barnaamijka horudhaca ah ee loogu tala galay dadka soo galootiga ah
Makhaayada iyo raashinka
Xarunta ku taal Nynäshamn ee KompetensCentrum - NKC waa goob waxbarasho oo degamadu eey leedahay looguna tala galay dadka waaweyn ee degan degmada Nynäshamn. Halkaan waad imaan kartaa haddii aad dooneysid inaad aqontaada kor u qaadid ama aad u baahantahay jiheyn xaga waxbarashada ah. NKC waa laguugu tala galay hadii aad tahay qof wadanka ku sucub isla markaana u baahan inuu barto luqadda iswiidhishka, raba inuu doorto waxa uu rabo inuu ka shaqeeyo mustaqbalka ama raba inuu usoo dhawaado suuqa shaqada.
Iskoolka hiddaha iyo dhaqanka waa qeyb u ah degmada Nynäshamn dhaqankeeda waxeeyna carruurta siisaa aqoon dhaqameed muhiim ah, sidoo klale waxeey xili firaaqeed wanaagsan siisaa dhalinyarada iyo dadka waweyn.
Iskoolka Naturskolan waa waxbarasho ku saabsan seyniska iyo bii'ada iyo waxbarashada farsamada it.Waxeey ku shaqeeyaan qaabka in gudaha lagu barto bannaanka.
Waxbarashada dadka waaweyn Iskoolka dhaqanka Iskoolka Naturskolan
Degmada waxaa ku yaal xarumo caafimaad oo badan . Halkan waxaad ka heleysa arug caafimaad oo loogu tala galay waxyaabaha guud, rugta carruurta, rugta hooyada iyo dallaanka iyo rugta ilkaha.
Markaad ka safreysid una safreysid Nynäshamn waxaad qaadan kartaa Tareennada SL:ka iyo basas.
Waxaa degmada ku yaal shan meelood oo tareenka laga raaco sadax kamid ahna magaaladeey ku yaallaan. Tareenka kaa qaada Isteeshinka Nynäshamn waxuu Stockholm kugu geeynayaa 60 daqiiqo.
Nynäshamn waxaad kasii aadi kartaa Gotland iyo skärgårdsöarna Nåttarö, Aspö, Norrö, Rånö iyo Ålö adigoo raacaya Waxholmsbolaget.
Dad badan ayaa u safra degmooyinka agagaarka ku yaal laakiin dad badaa ayaa usoo shaqo tago degmada Nynäshamn.
Shaqa bixiyayaasha ugu weyn ee degmada waa Nynäshamns kommun, Nynas AB, Legevisitten AB, Keolis Sverige, iyo Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Degmada boggeeda internetka waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan shaqada ganacsi ee kasocota degmada.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Nynäshamn